उदयपुरमा भेटिएका संक्रमित ११ भारतीय : मंसिर २५ मा नेपाल आएर चार जिल्लाका १३ मस्जिदमा बसेका थिए – Health Post Nepal
२०७८ वैशाख ६ गते | Monday, 19 Apr, 2021
उदयपुरमा भेटिएका संक्रमित ११ भारतीय : मंसिर २५ मा नेपाल आएर चार जिल्लाका १३ मस्जिदमा बसेका थिए
२०७७ वैशाख ६ गते १२:२६
नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीको जोखिम बढ्दै गएपछि विदेशबाट आएका मान्छे खोज्ने क्रम सुरू भएको थियो।
विशेषगरी ‘लकडाउन’ सुरू भएपछि प्रहरीले भारत तथा अन्य खाडी मुलुकबाट आएका मान्छे खोज्न थालेको थियो।
यसै क्रममा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरको टोलीले त्रियुगा नगरपालिका-३ भुल्केस्थित मस्जिदमा १२ भारतीय र चार नेपालीलाई केही दिनअघि मात्र फेला पारेको थियो।
फेला परेका सबैको परीक्षण आवश्यक देखिएपछि स्वाब लिइएको थियो।
प्रहरीका अनुसार उनीहरू नेपालका मस्जिदहरूको लामो भ्रमणमा निस्केका थिए, चैत ११ गते लकडाउन सुरू भएपछि उनीहरू त्यहीँ रोकिएका थिए।
यसअघि मस्जिद घुम्न आएकै तीनजनामा कोरोना देखिएको थियो। सप्तरी हुँदै वीरगन्ज पुगेका तीन भारतीयमा कोरोना देखिएको थियो।
कोसी अञ्चल अस्पताल विराटनगरमा स्वाब परीक्षण गर्न पठाइएका १६ मध्ये १२ जनामा कोरोना संक्रमण रहेको शुक्रबार पुष्टि भएको छ।
संक्रमितमध्ये एकजना नेपाली र ११ जना भारतीय रहेको बुझिएको छ। एक नेपाली मोरङकै रहेको थाहा भएको छ।
यी भारतीय कसरी नेपालसम्म आइपुगेका थिए भन्ने अहिले चासोको विषय बनेको छ।
उदयपुरका प्रहरी उपरीक्षक वीरबहादुर बुढाका अनुसार १२ जना नयाँदिल्लीबाट मंसिर २५ गते रेलमार्फत विराटनगरको जोगबनी नाका हुँदै नेपाल भित्रिएको थाहा भएको छ। उनीहरू सबै मुस्लिम समुदायका थिए।
जोगबनीबाट विराटनगर आएपछि उनीहरू केही दिन त्यहीँको एउटा मस्जिदमा बसे। मस्जिदका चारजना नेपालीलाई लिएर उनीहरू भ्रमणमा निस्केको देखिन्छ।
‘विराटनगर, सुनसरी, सप्तरी हुँदै उनीहरू उदयपुर पुगेको देखिन्छ,’ एक नम्बर प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक शेखर कोइरालाले हेल्थपोस्टनेपालसँग भने।
कोइरालाका अनुसार उनीहरू बीचमा कता-कता कति दिन बसे त्यसको विवरण खोजिने क्रममा छ।
तर, पछिल्लोपटक फागुन २५ गते उनीहरू उदयपुरको सुन्दरपुरस्थित मस्जिदमा पुगेको देखिन्छ। उनीहरू त्यहाँ सात दिन बसेर चैत १ गते त्रियुगा नगरपालिका-३ को मस्जिद पुगेका थिए।
‘त्यहाँ बस्ने क्रममै लकडाउन सुरू भएपछि उनीहरू अन्यत्र जान पाएनन्,’ कोइरालाले भने।
उदयपुरका प्रहरी उपरीक्षक बुढाका अनुसार उनीहरू मोरङ, सुनसरी, सप्तरी र उदयपुरका १३ वटा मस्जिदमा बसेको खुलेको छ। मोरङ छिरेपछि उनीहरू त्यहाँका चारवटा मस्जिदमा बसेका थिए।
त्यसपछि सुनसरी पुगेर उनीहरू चारवटा मस्जिदमा बसे। सप्तरीका तीनवटा मस्जिदमा बसेपछि उनीहरू उदयपुर पुगेको पत्ता लागेको छ। उदयपुर पुगेर एउटा मस्जिदमा सात दिन बसेपछि उनीहरू अर्को मस्जिद पुगेका थिए।
‘कुन-कुन मस्जिदमा बसे भन्ने कुरा अहिले हामीले भन्न मिलेन, जुन मस्जिदमा बसेका छन्, त्यहाँका सबैको परीक्षण गर्न आवश्यक देखियो,’ प्रदेश नम्बर १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले हेल्थपोस्टनेपालसँग भने।
यो घटनासँगै मंसिरमै नेपाल प्रवेश गरेका ती भारतीय त्यतिबेलै कोरोना भाइरस बोकेर भित्रिएका थिए त? भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ। ‘यो अहिले सूक्ष्म खोजीको विषय बनेको छ,’ मन्त्री कार्की भन्छन्।
तर, प्रहरीका अनुसार वीरगन्जमा भेटिएका तीनजना भारतीय संक्रमितहरूसँगै उनीहरू सप्तरीको धार्मिक सभामा पनि थिए।
बोदेबरसाइन नगरपालिका-५ मा फागुन ३, ४ र ५ गतेसम्म अल्मी इज्तिमाको आयोजनामा भएको मुस्लिम समुदायको सम्मेलनमा सहभागीका भारतीय मुस्लिमहरू सिमानाका जिल्लामा भएका विभिन्न मस्जिदको भ्रमण गर्दै वीरगन्ज, उदयपुर र चितवनलगायतका जिल्ला पुगेका हुन्। त्यही समूहका १२ जना चितवनको क्वारेन्टाइनमा छन्। उनीहरू नेपालका मात्रै होइन यात्राका क्रममा सिमानामा पर्ने भारतीय मस्जिदहरूमा समेत घुमेका थिए।
१३ वटा मस्जिदमा लामो समय बस्दा ती भारतीयसँग धेरै मान्छेको संगत भएको देखिन्छ। ‘उनीहरू आफैं कति जनालाई भेट्यौं भन्नेमा यकिन छैनन्, यसले असंख्य जनसंख्याको आँकलन हुन आउँछ,’ मन्त्री कार्कीले भने।
कोरोना संक्रमित १२ जनालाई विराटनगरस्थित कोसी अञ्चल अस्पतालले सञ्चालन गरिरहेको कोरोना अस्पताल भर्ना गरिएको छ। उनीहरूसँगै रहेका चारजनामा कोरोना संक्रमण नदेखिएपछि मोरङको टाँडीस्थित क्वारेन्टाइन पठाइएको छ।
संक्रमित सबै पुरुष छन्। चारजना २८ वर्ष उमेर समूहका छन्। बाँकी सबै सोभन्दा माथि ४० वर्षमुनि उमेर समूहका छन्।
कोरोना भाइरसको उत्पत्ति भएको चीनको उहान सहरमा डिसेम्बर अन्तिममा मात्र पुष्टि भएको थियो। मंसिरमै नेपाल भित्रिएका भारतीयले कोरोना बोकेर आएका हुन सक्छन्?
चिकित्सकहरू यसको अनुसन्धानमा छन्।
‘मंसिरमै कोरोना बोकेर भारतीयहरू आएको भन्ने विषय अपत्यारिलो लाग्छ,’ कोसी अञ्चल अस्पताल विराटनगरकी मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. संगीता मिश्र भन्छिन्, ‘नेपाल आएपछि नै संक्रमण भएको हुनुपर्छ। यो सबै बुझ्न सबै मस्जिदहरूमा बसेको रेकर्ड खोज्न आवश्यक छ।’
मिश्रले यसको तर्क पनि पेस गरिन्। ‘उनीहरू सबैको आरडिटी नेगेटिभ छ। स्वाबमात्र पोजेटिभ छ, यसकारण संक्रमण पुरानो हैन। सोर्स नेपालभित्रै छ,’ मिश्रले भनिन्।
कोरोना संक्रमण पनि धेरै पुरानो नभएको मिश्रले दाबी गरिन्। ‘संक्रमण एक दुई साताको मात्र हो,’ मिश्रले भनिन्।
वैशाखभरि सहरी क्षेत्रका विद्यालय बन्द गर्ने सरकारको निर्णय
चिकित्सा शिक्षाका विषय पढ्न अब चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग अनुमति लिनुपर्ने
छ महिना देखि ५ वर्षसम्मका बालबालिकालाई आज भिटामिन ए खुवाइँदै
परिर्वतन भयो दोस्रो मात्राको खोप लगाउने मिति
युवा चिकित्सक तेम्वेको निधन
कोरोनाबाट ५ वर्षमुनिका १० बालबालिकाको मृत्यु
तीव्र हुँदै कोरोनाको दोस्रो लहर, एकै दिन १०९६ जनामा संक्रमण पुष्टि
विद्यालय बन्द गर्न अझै आनाकानी, एकै दिनमा ८९ बालबालिका संक्रमित
बालबालिकालाई विद्यालय नपठाउन बालरोग विशेषज्ञ समाजकाे आग्रह
स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा जागिरको अवसर
स्वास्थ्यका १५२० कमचारीको समायोजन, को-कहाँ?
काठमाडौंमै प्राण गयो तर भेन्टिलेटर भेटिएन
२८ वर्षपछि बल्झिएको घाउ, ट्रमा सेन्टरमा सम्झनाले पाइन नयाँ जीवन
डाक्टर पढ्न कर्णाली आउनुस्
नर्सका हकहितको लागि गठन भयो ‘सरकारी नर्सिङ संघ’
२३ बर्षिय हेल्थ असिष्टेन्ट निर्मल स्नेहीको निधन
अधिकांशको समायोजन मागअनुरूप, १० दिनभित्र पत्र पाउने
विदेशमा महँगो उपचार गर्दा गर्व गर्ने, अनुभवी डाक्टरलाई ८ सय तिर्न धेरै हुने!